Shaqiri oo seegi doona kulamada kulamada furitaanka xilli ciyaareedka soo socda | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Shaqiri oo seegi doona kulamada kulamada furitaanka xilli ciyaareedka soo socda
Shaqiri oo seegi doona kulamada kulamada furitaanka xilli ciyaareedka soo socda
Posted by: Mahad Mohamed July 10, 2019
Himilo -Liverpool ayaa xaqiijisay in ciyaaryahanka garabka ka ciyaara Xherdan Shaqiri uu dhaawac jilibka ah kasoo gaaray intii uu u ciyaarayay Switzerland intii lagu jiray tartankii UEFA Nations League Final-kiisa.
Shaqiri ayaa seegi doona kulamada furitaanka isku diyaarinta xilli ciyaareedka ee Liverpool, oo ay ku jirto kulanka Khamiista ee ay la leeyihiin kooxda Tranmere Rovers iyo booqashada United States isbuuca soo socda.
Ciyaartoyda kale ayaa laga yaabaa inay helaan fursad ay isku muujiyan ka dib dhaawac soo gaaray Shaqiri, taasoo ay ku xaqiijisay website-ka rasmiga ah ee kooxda, seddexda weeraryahan ee kala ah Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo Sadio Mane ayaa la siiyay fasaxyo dheeraad ah.
Divock Origi oo lagu soo waramayo inuu qandaraas cusub u saxiixi doono Anfield, iyo 19 jirka Rhian Brewster ayaa laga yaabaa inuu ciyaarsiiyo Klopp kulamada furitaanka ee xilli ciyaareedka ka hor.
Waxaa la rumeysan yahay in dhaawaca Shaqiri uusan aheyn mid aad u culus, waxaana uu diyaar u noqon doonaa xilli ciyaareedka kulanka furitaanka ee Liverpool marka ay martigeliso Norwich City jimcaha, 9ka August.
27 jirkan ayaa dhaliyay lix gool 30 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkii hore.
Previous: Sacuudiga: Maxkamad xukun ku riday haweenay aflagaadeysay saygeeda hore
Next: Q1aad: Taariikhda garsoore Xamse Xaaji Cabdi
Man City oo la soo wareegeysa Samuel Umtiti
Kooxo reer England ah oo durba ku loolamaya Carlo Ancelotti
Kooxda Man City oo ku biirtay loolanka loogu jiro Nathan Ake